Faleeti | January 2020
Hababka basbaas goosashada xilliga qaboobaha: cuntada sida caadiga ah
Tan iyo bishii Febraayo, marathon basbaaska wuxuu bilaabmaa: qoyi miraha, ku beeri geedo kuna cuna sida ilmo yaryar, iyaga ku beeraan dhulka, ka ilaali qabow, raadso xaafad ku haboon, suugo, biyo, bacrimin, baabuur wakhti iyo wixii la mid ah. Oo hadda, ugu dambeyntii, beergooyska, laakiin waxa badan! Sidee haddaba leh hanti ahaan in la kala qaado wax kasta oo faa'iido leh oo ku jira basbaas, ku filan oo dhan iyo waqti dheer?
Waa maxay basbaas cagaaran oo faa'iido leh?
Bariil Green Bulgarian (basbaas macaan oo macaan) waa miro ah warshad herbaceous sanadlaha qoyska Solanaceae. Waxaa si ballaaran loo qaybiyey oo ku beeray Ukraine, Russia, Italy, Romania, Bulgaria, Greece. Maanta waa cagaar caan ah, taas oo qofkasta ogyahay. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa qiimaha nafaqada iyo walaxda kalooriga ee basbaaska cagaaran, iyo sidoo kale faa'iidooyinka iyo dhaawaca jirka.
Summer waa wakhti aad u yaab leh marka khudaarta cusub ay u bislaadaan, ka buuxsantay faa'iidooyinka, dhadhan iyo isugeyn ka mid ah midabada kala duwan. Maydhin, basbaaska midabka leh: casaan, cagaaran, oranji, huruud ah iyo xitaa midabkeedu kala duwan yahay menka iyo samaynta suxuunta xarrago leh, faa'iido leh, iyaga oo siinaya dhadhan gaar ah iyo muuqaal muuqaal ah.
Sida loo koro geedo of basbaas Bulgaiga ee Ural: talooyin waxtar leh ee Fiisooyinka khibrad leh
Gobol kasta waxaa lagu gartaa shuruudaha cimilada gaar ah si loo dabaasho khudaarta. Ma aha waqti dheer ka hor, waxay ahayd ku dhowaad aan macquul aheyn in la qiyaaso sii kordhaya ee Urals a basbaas heer-kulul Bulgarian. Laakiin iyada oo horumarinta tiknoolojiyada beeraha iyo noocyada taranta, tani waxay noqotay mid dhab ah. Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho goosashada wanaagsan ee basbaas, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo isku diyaarinta for ay beerto ilaa tan jiilaalka.
Sameynta basbaaska kuleylka qaboobaha: cuntada ugu wanaagsan ee qoyskaaga
Chillies, basbaas ama qadhaadh - waa wax walba oo ku saabsan khudradda isku mid ah, oo ku saabsan basbaas. Way fiicantahay labadaba sida dhirta iyo saxan gooni ah. Oo waa wax faa'iido leh, markaa ma ka cabsan kartid si dhexdhexaad ah naftaada fiiqan. Waa maxay khudradda wanaagsan iyo waxa u fiicnaanaya in la kariyo - ogow soo socda. Qormo yar oo ku saabsan faa'iidooyinka basbaaska kuleylka ah Wax soo saarku waa fiiqan dhadhan sababtoo ah joogitaanka capsaicin ee alkaloid.
Sida loo kariyo basbaaska Ermeniga xilliga qaboobaha
Qaran walbaa wuxuu leeyahay cuntooyin caano ah oo waqti-u-go'an. Tusaale ahaan, basbaaska pickled, ama paprika. Dhammaan cuntooyinkaas way kala duwan yihiin iyaga oo isu dheelitiraya badeecooyinka, iyo sidoo kale dhir udgoon iyo dhir udgoon. Maqnaanshaha cuntadu waa Ereyga Ereyga, suxuunta taas oo lagu kala soocayo isbeddelka iyo dhadhanka macaan.
Baasaboor Bulga ee xilliga qaboobaha: sida loo soo saaro khudradda
Baasaboor wanaagsan oo diyaar u ah beli ma aha oo kaliya muraayad kasta, laakiin sidoo kale si sax ah u qaadan doonaa meesha sharaf ah ee hit ugu delicious. Waa cunto kariseyaal badan oo ka fikiraya wax bacrin ah si loo abuuro sheekooyin naxwi ah. Sidaa daraadeed aynu ku ogaanno sida loo diyaariyo khudraddaas xilliga jiilaalka, si dhakhso ah iyo dhadhan fiican u hesho.
Sidee loo kariyaa basbaaska macaan ee Suugaanta ee xilliga qaboobaha: Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo sawir leh
Baasaboorka Bulgarian wuxuu ku jiraa liiska ugu muhiimsan ee khudradda cagaaran sababta oo ah qadarka weyn ee ascorbic acid ee ka kooban. Khudradda noocan oo kale ah ayaa ah mid caan ah oo waxtar leh oo la adeegsan karo: waxaa la cunaa cusub, la kariyey, la shiilay, la goostay xilliga jiilaalka. Waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah hababka jiilaalka qaboobaha ee khudradda, sida pickling, maanta.
Sida loo xiro basbaaska ee walxaha qaboobaha: cuntada sida sawirada ah
Basbaaska qasacadaysan waa mid ka mid ah cuntooyinka caanka ah ee ugu caansan dalkeenna xilliga qaboobaha. Si kastaba ha noqotee, waa wax aan suurtagal ahayn in la helo tufaax cusub, tufaax iyo tufaax leh qiimo jaban xilliga jiilaalka. Xaaladdan oo kale, xalka ugu fiican wuxuu noqon doonaa basbaaska goosashada jiilaalka. Cunto karinta waa mid sahlan waxayna ku jiri doontaa xoog, xataa haddii aadan khibrad u lahayn banaan.
Sida loo diyaariyo basbaaska la kariyay ee Bulgarian ah ee qaboobaha: Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo sawir leh
Xilliga jiilaalku waa mid aad u fiican in la furo weel kusaabsan ilaalinta guriga iyo in uu ku raaxaysto dhadhanka, xusuusta xagaaga. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee loogu talagalay diyaarinta jiilaalka waa basbaas macaan ee Bulgarian, jiidhkiisa wuxuu hayaa cufnaanta iyo dhibcaha si fiican. Kuwa ugu caansan waa in la gooyo khudaarta duban ee marinade, ilaalinta noocan oo kale ah ayaa si fiican loo ilaaliyaa waxayna leedahay dhadhan qafiif ah iyo dhadhan macaan, iyo qashinka qandhada ayaa haynaya casiirnimada.
Fursadaha lagu keydiyo basbaaska kulul ee jiilaalka, cuntada sida caadiga ah
Haddii aad ku caajisid diyaargarowga xilliga qaboobaha ee qajaarka, yaanyada iyo lecho, waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad isku daydo caanaha iyo basbaaska kulul. Fursadaha loogu talagalay soo-saarka xuduudaha. Oo iyagu, shaki la'aan, kala duwanaanta menu ee jiilaalka, oo ku quudiya fiitamiin muhiim ah. Iyadoo qaar ka mid ah, ugu xiisaha badan oo dhadhan fiican, waxaan kuu soo bandhigi doonaa maqaalkan.